Inona no mahatonga ny fahefana hiverina ho any aoriana?
Maro ireo tompon-tranonkala manontany tena hoe firy ny backlinks mila ilainy hananganana fanatanjahantena goavana amin'ny aterineto. Tsy misy valiny mazava ho an'ity fanontaniana ity. Amin'ny fomba maro, io no fanontaniana tsy mety hangatahana rehefa mandalina momba ny backlinks ho an'ny SEO satria ny olana momba ny fananganana rohy iray manontolo dia mitodika amin'ny kalitaon'ny ankamaroan'ny rohy mankany anaty. Anatin'ity lahatsoratra ity, dia hijery akaiky ny teknika fiverimberenana isika ary hianatra ny fomba hahazoana rindran-kaonty ambony amin'ny tranokalanao. Hodinihintsika ny fomba fijerin'i Google azy ireo, ny rindran-kihon-dàlana mamokatra ny siramamy ankapobeny ary ny fomba hanatsarana ny kalitaon'ny rohy miditra.
Ny fifandraisana amin'ny PageRank sy backlinks
PageRank dia toy ny fandefasana Google amin'ny tranokalan'ny tranonkala ao amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana. Izy io no iray amin'ireo fampahalalana manan-danja indrindra izay nandraisa-kevitra tamin'ny fanapahan-kevitra momba ny SERP. Ny tranonkala iray resahina amin'ny sehatra maro dia azo antoka fa ambony noho ny SERP. Ny fitsipika fototra izay napetraka ao ambadiky ny pejy PageRank dia ny hoe ny rohy kokoa ny tranonkala dia azonao avy amin'ny loharano hafa, ny pejy manan-danja indrindra io pejy io. Google dia mankasitraka ny kalitaon'ny rohy anatiny ary manamarina ny lahatsary azo raisina mifandraika amin'ny sehatra misy anao.
Google dia manombatombana ny pejy zero hatramin'ny folo. Ireo pejy izay manana laharana zero dia spam na tranonkala tranonkala tsy misy kalitao na votoaty manan-danja. Ny tranonkala izay manana laharam-pahamehana PR10 dia TOP laharana loharanom-pahefana manana laza tsara sy fihenam-bidy avo lenta.
Tsara ny manamarika fa tsy marim-pototra ny pejy PageRank, fa ny fanehoana fotsiny. Araka izany, pejy iray PR3 dia ho sarobidy sy manan-danja kokoa noho ny pejy PR2. Izany no mahatonga ny rohy avy amin'ny pejy iray manana pejy SideRank dia manana lanjany bebe kokoa noho ny rohy zato avy amin'ny loharanom-pahamendrehana malemy miaraka amin'ny PR ns.
Inona no mahatonga ny backlinks amin'ny kalitaony?
Tsy isalasalana, fa ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera dia te hifandray mivantana amin'ireo olo-tsaranga marobe toy ny Wikipedia, Facebook, Amazon na Moz izay manana ny pejy ambony indrindra. Raha ny tena izy, ho an'ny orinasan-tserasera maro be mbola tsy vita izany. Soa ihany, mety hahazo rohy mankany amin'ny tranokala midadasika ianao ary hahatonga anao ho sarobidy ihany koa ireo rohy ireo.
Google dia mampiasa ny isan'ireo fepetra samihafa rehefa manombatombana ny kalitaon'ny rohy mankany anaty. Voalohany indrindra, dia manamarina ny maha-zava-dehibe ny loharanom-baovao izy io ary manara-maso ny tombontsoan'ny mpampiasa. Ny kritera hafa dia azo itokisana amin'ny sehatra. Ny tranokala azo itokisana dia azo alaina avy amin'ny PageRank sy ny isa ary ny kalitaon'ny rohy avy amin'ny loharano hafa izay manondro an'ity tranonkala ity. Ankoatra izay, ny lahatsoratra manintona dia tokony hifanaraka amin'ny pejy mifandray amin'ny. Ny rohy hafa izay manondro an'ity tranonkala ity dia tokony avy amin'ny tranokala avo vaventy. Ireo rohy ireo dia tokony avy amin'ny loharano samihafa ary tsy azo alaina.
Noho izany, raha ny pejy mifandray amin'ny tranonkalanao manaraka ireo fepetra Google rehetra ireo, dia mety ho hitanao ny fanatsarana ny lanjan'ny tranonkalanao. Na izany aza, tokony tsy miharihary fa mifanaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto ianao. Farafahakeliny telo amin'izy ireo no ho ampy. Ohatra, mety hanonitra ny maha-zava-dehibe ny vidin'ny fifamoivoizana ianao Source .